Infekshanka H pylori ayaa ah mid ka mid ah waxa sababa gaastriiga, boogaha caloosha iyo mindhicirada – Barocaafimaad |
Qormo & Warar
Infekshanka H pylori ayaa ah mid ka mid ah waxa sababa gaastriiga, boogaha caloosha iyo mindhicirada
Infekshanka H.pylori wuxuu dhacaa marka noocyo geermis ah ama bakteeriyo ah oo loo yaqaan Helicopter pylori ay ku dhalato caloosha. Waxayna arintaan badanaa dhacdaa xilliga caruurnimada. Caabuqa ay sababto h.pylori wuxuu sababaa xanuunka loo yaqaan boog calooleedka, ama boogta xiidmaha iyo boogta caloosha oo soomaalidu u taqaan gaas.
Dadka badankoodu ma ogaadaan in ay qabaan infekshanka h.pylori, sababtoo ah kuma keento xanuun. Hadii aad isku aragtid calamadaha gaaska, dhakhtarkaagu wuxuu ku qasban yahay inuu kaa baaro bakteeriyada h.pylori. Hadii aad qabtid infekshanka h.pylori waxaa lagu dawayn karaa dawooyinka loo yaqaan qalajiyaasha
Maxaa sababo infekshanka H pylori
Wali ma cada sababta dhabta ah ee keenta infekshanka h.pylori. Balse waxaa la og yahay in bakteeriyada h.pylori saamayn badan ku lahayd nolosha aadanaha kumanaan sano kahor. Infekshanka ay sababto bakteeriyadan waxaa la iskugu gudbin karaa siyaabo badan oo ay kamid tahay, dhunkashada afka la iska dhunkado, waxaa sidoo kale la iskugu gudbin karaa saxarada dadka oo si khaldan ugu dhex mil mata cuntada iyo biyaha dadku isticmaalaan, iyo dadka oo aan gacmaha iska nadiifin markay suuliga isticmaalaan.
Bakteeriyada h.pylori waxay saamayn wayn ku yeelataa xuubka caloosha waxayna soo daysaa dheecaano dhex dhexaad ka dhigi kara aashitada calooshu soo dayso oo aad u awood badan. Dheecanada H.pylori soo dayso iyo aashitada calooshu waxay dhaawac u gaystaan xuubka jilicsan ee caloosha, dhaawacaas oo ugu danbayn keenaya in xiidmaha iyo calooshu yeeshaan boog aan waqti yar ku bogsoon karin.
Dadka badankoodu ma dareemaan astaamo lagu garan karo infekshanka h.pylori. Balse marka infekshanka h.pylori noqdo mid caloosha ama xiidmaha boog ku sameeya, markaas ayaa dadka badankoodu dareemaan calaamado ama astaamo run ah. Astaamahaas waxaa kamid ah:
calool xanuun khaas ahaan marka calooshu marantahay ama wax yar kadib marka qofku cunto cunno. Xanuunkaas waxaa lagu qeexi karaa mid marna tagaya marna soo laabta. Hadii qofku qaato dawooyinka yareeya aashitada caloosha badanaa astaamahu way yaraadaan.
Lalabo ama matag
Abateedka oo yaraada
Afka oo ura.
Khatarta ka dhalan karta infekshankaan
Infekshanka h.pylori wuxuu ugu horayn sababaa boog calooleed ama boog xiidmeed, balse boogta ayaa keeni karta khataro waawayn oo halis galin kara caafimaadka qofka. Waxaana kamid ah:
Dhiig bax ka dhaca gudaha jirka, tani waxay dhici kartaa marka xididada yar yar ee boogta mara dilaacaan.
Boogta caloosha ama xiidmaha oo xirta marinka cuntadu mari kahayd.
Caabuq ku yimaada darbiga caloosha ama xiidmaha
Sidee looga hortagi karaa H pylori
Kahortagu wuxuu mar walba ka fiican yahay dawaynta. Hadii aad doonaysid inaad kahortagtid H.pylori raac qodobadaan.
Dhaq gacmahaaga markaad kasoo baxdid suuliga, iyo intaadan cuntada bilaabin. Sidoo kale bar ilmahaaga sida loo dhaqdo gacmaha loona dilo germska.
Ha cabin hana cunin cunto ama biyo aan nadiif ahayn
Sifiican u kari cuntada ciiriinka ah
Iska ilaali inaad cuntid cuntooyinka ay kariyeen dadka aan dhaqin gacmahooda
Wax ka baro xanuunka qallalka iyo noocyada uu u kala baxo
Waa maxay cagaarshoowga noociisa B uu ku keeni karo jirka
Rukumo warsidaheenna todobaadlaha ah
Macluumaadka ku jira Barocaafimaad waxaa loogu talo galay aqoon kororsi kaliye, ee fadlan booqo dhaqtar si aad u heshid baaris iyo daweyn caafimaad.
© Copyrights 2019. All Rights Reserved. Designed & Maintained by Suubbis